Igama lesiqhelo: i-divalproex sodium
Igama lebrand: Idepakote, i-Depakote ER, i-Depakote Sprinkles
By Uhlaziyo lweMedia; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz. Igqityelwe ukuhlaziywa ngoFeb 27, 2020.
Yintoni i-divalproex sodium?
I-Divalproex sodium iza ngeendlela ezahlukeneyo zeepilisi ezisetyenziselwa izinto ezahlukeneyo.
Amacwecwe e-Divalproex kunye neephilisi zisetyenziselwa ukunyanga ukuxhuzula kubantu abanesifo sokuwa abaneminyaka eli-10 ubudala. I-Divalproex sodium ngamanye amaxesha isetyenziswa kunye namanye amayeza okubamba.
I-derma vet yokuthambisa izinja
Amacwecwe e-Divalproex sodium nawo asetyenziswa kubantu abadala ukukhusela iintlungu zentloko, okanye ukunyanga iziqendu ze-manic ezinxulumene nokuphazamiseka kwengqondo (uxinzelelo lwe-manic).
I-Divalproex sodium nayo inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo sonyango.
Loluphi olona lwazi lubalulekileyo ekufuneka ndilwazi malunga ne-divalproex sodium?
Akufanele usebenzise i-divalproex sodium ukuba unesifo sesibindi, ukuphazamiseka komjikelo we-urea, okanye isifo semfuchondrial esinjengesifo seAlpers okanye isifo seAlpers-Huttenlocher.
Sukuqala okanye uyeke ukuthatha i-divalproex sodium ngexesha lokukhulelwa ngaphandle kwengcebiso kagqirha wakho. I-Divalproex sodium inokulimaza usana olungekazalwa, kodwa ukuxhuzula ngexesha lokukhulelwa kunokulimaza umama nosana. Sukusebenzisa i-divalproex sodium ukunqanda iintlungu zentloko ukuba ukhulelwe.
I-Divalproex sodium inokubangela ukusilela kwesibindi okunokubulala, ngakumbi kubantwana abangaphantsi kweminyaka emi-2 ubudala, nakubantu abaneengxaki ezithile zemfuza.
Tsalela umnxeba kwangoko ukuba umntu othatha eli yeza uneempawu zesibindi okanye zepancreas. njengoku: ukungabi namdla wokutya, iintlungu zesisu (ukusasazeka emqolo), isicaphucaphu esiqhubekayo okanye ukugabha, umchamo omnyama, ukudumba kobuso, okanye i-jaundice (ukuba tyheli kolusu okanye kwamehlo).
Sukuyeka ukusebenzisa i-divalproex sodium ngaphandle kwengcebiso kagqirha wakho. Ukuyeka ukusetyenziswa ngesiquphe kunokubangela uhlobo olubi lokuthimba olunokusongela ubomi.
Yintoni endifanele ndixoxe ngayo nomboneleli wam wezempilo ngaphambi kokuba ndithathe i-divalproex sodium?
Akufanele usebenzise i-divalproex sodium ukuba awudibani nayo, okanye ukuba unayo:
ukuphazamiseka komjikelo we-urea; okanye
isifo semfuzondrial ukuphazamiseka okunje ngesifo seAlpers okanye isifo seAlpers-Huttenlocher, ngakumbi kubantwana abangaphantsi kweminyaka emi-2 ubudala.
I-Divalproex sodium inokubangela ukusilela kwesibindi okunokubulala, ngakumbi kubantwana abangaphantsi kweminyaka emi-2 ubudala, nakubantu abanesifo se-mitochondrial disorder.
Tshela ugqirha wakho ukuba wakhe wanakho:
iingxaki zesibindi ezibangelwa yimfuxondrial disorder;
ukudakumba, ukugula ngengqondo, okanye ukucinga okanye ukuzibulala; okanye
Imbali yosapho yokuphazamiseka komjikelo we-urea okanye ukufa kosana ngaphandle kokwazi unobangela.
Abanye abantu baneengcinga zokuzibulala ngelixa bethatha i-divalproex sodium. Ugqirha wakho uya kudinga ukuvavanya inkqubela phambili yakho kutyelelo rhoqo. Usapho lwakho okanye abo bakukhathaleleyo kufuneka baluphaphele utshintsho kwiimvakalelo zakho okanye kwiimpawu zakho.
Sebenzisa i-divalproex sodium ngexesha lokukhulelwa kunokunyusa umngcipheko weziphene zokuzalwa ezinokukhula kwangoko xa ukhulelwe. nangaphambi kokuba wazi ukuba ukhulelwe. Sebenzisa eli yeza ngaphambi kokukhulelwa kunokuchaphazela amandla okuqonda omntwana wakho (ukuqiqa, ubukrelekrele, ukusombulula iingxaki) kamva ebomini. Nangona kunjalo, ukuxhuzula ngexesha lokukhulelwa kunokonzakalisa bobabini umama nosana.
Ukuba uthatha i-divalproex sodium yokubanjwa okanye iziqendu zomntu: Isibonelelo sokuthintela ukuxhuzula okanye iziqendu zomntu sinokugqitha kuyo nayiphi na ingozi ebangelwa leli yeza. Kusenokubakho amanye amayeza akhuselekileyo ukusetyenziswa. Sukuqala okanye uyeke ukuthatha i-divalproex sodium ngaphandle kwengcebiso kagqirha wakho.
Sukusebenzisa i-divalproex sodium ukukhusela iintlungu zentloko ukuba ukhulelwe okanye unokukhulelwa.
Ukuba ukhulelwe, sebenzisa indlela esebenzayo yokuthintela ukukhulelwa ngelixa usebenzisa i-divalproex sodium. Xelela ugqirha wakho ukuba uqala okanye uyeke ukusebenzisa izinto zokucwangcisa zehomoni eziqukethe i-estrogen (iipilisi zolawulo lokuzalwa, inaliti, izinto zokufakelwa, iziqwengana zolusu kunye nemisesane yelungu lobufazi). I-Estrogen inokusebenzisana ne-divalproex sodium kwaye iyenze ingasebenzi kakuhle ekuthinteleni ukuxhuzula.
Akunakukhuseleka ukuncancisa ngelixa usebenzisa eli yeza. Buza ugqirha wakho ngayo nayiphi na ingozi.
Ndingayithatha njani i-divalproex sodium?
Landela yonke imikhombandlela kwileyibhile yakho yonyango kwaye ufunde zonke izikhokelo zamayeza okanye amaphepha emiyalelo. Ngamanye amaxesha ugqirha wakho unokutshintsha idosi yakho. Sebenzisa iyeza ngokuchanekileyo njengoko kuyalelwe.
Sela amanzi amaninzi ngelixa usela eli yeza. Idosi yakho inokufuna ukutshintsha ukuba awuseli manzi ngokwaneleyo suku ngalunye.
Ginya ifayile ye- philisi okanye Ithebhulethi iphelele kwaye ungayityumzi, uyihlafune, uyiqhekeze, okanye uyivule.
Ukuba awukwazi ukugwinya i-microgranule capsule epheleleyo, yivule kwaye uyigalele iyeza kwicephe le-pudding okanye i-appleauce. Gwinya umxube kwangoko. Sukuyigcina ukuze uyisebenzise kamva.
Uya kudinga iimvavanyo zonyango rhoqo.
Ukuba ufuna utyando, xelela ugqirha wotyando ngaphambi kwexesha ukuba usebenzisa i-divalproex sodium.
Ngexesha likaxakeka, jonga ubuchwephesha kuwe okanye nawe ukuze abanye bazi ukuba usebenzisa i-divalproex sodium.
Sukuyeka ukusebenzisa i-divalproex sodium ngequbuliso, nokuba uziva ulungile. Ukuyeka ukusetyenziswa ngesiquphe kunokubangela uhlobo olubi lokuthimba olunokusongela ubomi. Landela imiyalelo kagqirha wakho ngendlela yokunciphisa ngokuthe ngcembe idosi yakho.
Thatha iyeza ngokukhawuleza, kodwa ungatsiba idosi ephosakeleyo ukuba lixesha ledosi elandelayo. Musa ukuthatha amanani amabini ngexesha elinye.
Yintoni eyenzekayo kwi-overdose?
Yintoni ekufuneka ndiyiphephe ngelixa ndithatha i-divalproex sodium?
Ukusela utywala kunokunyusa iziphumo ebezingalindelekanga ze-divalproex sodium.
Kuphephe ukuqhuba okanye ukwenza izinto ezinobungozi de ube uyazi ukuba eliyeza liya kukuchaphazela njani. Ukuphendula kwakho kunokungahambi kakuhle.
Zeziphi iziphumo ezinokubakho ze-divalproex sodium?
Funa unyango olukhawulezileyo ukuba unayo iimpawu negazi lakho (iinyosi, ubunzima bokuphefumla, ukudumba ebusweni okanye emqaleni) okanye ulusu olunamandla (umkhuhlane, umqala obuhlungu, amehlo atshisayo, iintlungu zesikhumba, irhashalala elibomvu okanye limfusa ngokudumba kwamadyungudyungu).
Funa unyango ukuba uneempendulo ezingathandekiyo ezinokuchaphazela amalungu amaninzi omzimba wakho. Iimpawu zinokubandakanya: irhashalala, umkhuhlane, amadlala adumbileyo, iintlungu zemisipha, ubuthathaka obukhulu, ukutyumka okungaqhelekanga, okanye ubumthubi kwesikhumba okanye kwamehlo.
Xela ugqirha wakho ngazo naziphi na iimpawu ezitsha okanye eziya zisiba mbi, ezinje: ngokutshintsha kwemozulu okanye indlela oziphethe ngayo, uxinzelelo, unxunguphalo, ukuphazamiseka, ukulala, okanye ukuba uziva unyanzelekile, ucaphukile, uphazamisekile, unentiyo, ungqwabalala, ungonwabi, awunangqondo (ngokwengqondo okanye ngokwasemzimbeni) , okanye ucinga ngokuzibulala okanye ukuzenzakalisa.
Biza ugqirha wakho ngoko nangoko ukuba unayo nayiphi na eminye imiphumo emibi:
Ubuhlungu beempawu zentlungu yomvavanyi
ukutyumka ngokulula, ukopha okungaqhelekanga (impumlo, umlomo, okanye iintsini), amabala emfusa okanye abomvu phantsi kolusu;
umkhuhlane, amadlala adumbayo, izilonda zomlomo;
ukudideka, ukudinwa, ukuziva ubanda, ukugabha, utshintsho kwimeko yakho yengqondo;
ukozela kakhulu; okanye
ukuxhuzula kuya kusiba mandundu.
isicaphucaphu, ukugabha, iintlungu esiswini, urhudo, ukuqhina;
intloko ebuhlungu, umqolo obuhlungu;
isiyezi, ukozela, ubuthathaka, ukungcangcazela;
iingxaki zememori, ukutshintsha kwemood, ukungalali kakuhle;
ukugruzuka okanye ukopha;
ukuvuza impumlo, umqala obuhlungu, ukukhohlela, ukuphefumla, ingxaki yokuphefumla
umkhuhlane, iimpawu zomkhuhlane;
ukuhamba nzima okanye ukulungelelanisa;
ukudumba ezandleni okanye iinyawo;
ukungaboni kakuhle, umbono ombaxa, iintshukumo zamehlo ezingaqhelekanga;
ukukhala ezindlebeni zakho;
irhashalala, ukulahleka kweenwele; okanye
utshintsho kubunzima okanye ukutya.
Olu luhlu alukho konke malunga neziphumo ebezingalindelekanga kwaye ezinye zinokwenzeka. Shayela ugqirha wakho malunga neengcebiso. Ungabika iziphumo ebezingalindelekanga ngokubiza i-FDA ngo-1-800-FDA-1088.
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela isalproex sodium?
Ngamanye amaxesha akukhuselekanga ukusebenzisa amayeza athile ngaxeshanye. Amanye amachiza anokuchaphazela amanqanaba egazi ngamanye amayeza owathathayo, anokunyusa iziphumo ebezingalindelekanga okanye enze amayeza angasebenzi kakuhle.
Amachiza amaninzi anokuchaphazela i-divalproex sodium. Oku kubandakanya amayeza amayeza kunye nalawo e-counter, iivithamini kunye nemveliso yemveliso. Ayisilo lonke unxibelelwano olunokwenzeka oludweliswe apha. Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza owasebenzisayo, kunye nawaphi na amayeza owaqalisayo okanye oyekayo ukuwasebenzisa.
Ndingalufumana phi ulwazi oluthe kratya?
Usokhemesti wakho unokubonelela ngolwazi oluthe kratya malunga ne-divalproex sodium.
Khumbula, gcina oku kunye nawo onke amanye amayeza apho abantwana bangenakufikelela khona, ungaze wabelane nabanye ngamayeza akho, kwaye usebenzise eli yeza kuphela xa umiselwe.
Yonke imizamo yenziwe ukuqinisekisa ukuba ulwazi olunikezwe yiCerner Multum, Inc. ('iMultum') ichanekile, ikhoyo ngoku kwaye iphelele, kodwa akukho waranti yenziweyo. Ulwazi lweziyobisi olubandakanyiwe apha lunokuba neengcebiso ezintsha. Ulwazi olulungiselelwe iMultum lwenzelwe abathengi kunye nolondolozo lwempilo e-United States of America (i-USA) kwaye ke iMultum ayiqinisekisi ukuba ukusetyenziswa ngaphandle kwe-USA kufanelekile, ngaphandle kokuba kuchazwe ngokuthe ngqo. Ulwazi lweMultum ngamachiza aluniki ziyobisi, okanye luchaze isigulana okanye lucebise unyango. Ulwazi ngamachiza amaninzi lusebenza njengomthombo wolwazi eyilelwe ukunceda abaqeqeshi bezempilo abanelayisensi ekunyamekeleni abaguli kunye / okanye ukukhonza umthengi ofumana le nkonzo njengoncediso, hayi njengelokubambela, ulwazi, amava, ulwazi kunye noluvo lwengcali yezempilo. Ukungabikho kwesi silumkiso sesiyobisi okanye indibaniselwano yeziyobisi akufuneki, nangayiphi na indlela, kuthathwe njengokwenza ukuba indibaniselwano yeziyobisi ikhuseleke, isebenze, okanye ilungele nasiphi na isigulana. IMultum ayinaxanduva lwayo nayiphi na inkalo yonyango olufumanayo ngoncedo lolwazi oluvela kwiMultum. Olu lwazi lubandakanyiweyo apha alwenzelwanga ngenjongo zokugubungela yonke into enokusetyenziswa, imiyalelo, izilumkiso, izilumkiso, ukusebenzisana namanye amachiza, ukungahambelani komzimba, okanye iziphumo ebezingalindelekanga. Ukuba unemibuzo malunga neziyobisi ozithathayo, buza ugqirha wakho, umongikazi, okanye usokhemisti.
Ilungelo lokushicilela 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Inguqulelo: 14.01.
Isoftware yokuhlela ividiyo ye-imovie mac
Iyeza 8 lokugonya iinkomo
iyeza lokukhohlela kunye nomkhuhlane
nini ukuthatha i-alpha lipoic acid
Iibhola ezimhlophe zeXanax g3722
ukuhambisa iinkqubo kwenye idrive